Nke a bụ nke e mere ka a mara site n'ozi a kụpụrụ nso-nso a, bụ nke Kọmishọna na-ahụ maka njem okporo ụzọ na steeti ahụ, bụ maazị Uchenna Okafor binyere aka na ya. Dịka ya bụ ozi sìrì kọwaa, gọọmenti steeti ahụ chọpụtara na ụfọdụ ndị mmadụ ka na-aga n'ihu na-enupù isi na ntụziaka gọọmenti nyere, bànyere mmachi ahụ a màchiri ịkwọ ọgbaa tum-tum n'Ọnịtsha na n'Awka. Gọọmenti jikwazị ohere ahụ wee chètara ọhanaeze na ya bụ mmàchi ka dịkwa ìrè, kwuo na onye ọbụla dara ya bụ iwu nà-enupùrú gọọmenti isi, ma bụrụkwa onye a ga-eji usoro iwu wee kpụọ isi ma e jìde ya. Ọ kpọkùrù ndị ọrụ dị iche iche nke ahụ dị n'aka ka ha dị ichu n'ọrụ ma gbadosie anya ike ịhụ na ha nwụchikọrọ onye ọbụla ga-aga n'ihu ịkwọ ọgbaa tum-tum n'ebe ndị ahụ.
Site na ya bụ ozi, gọọmenti gakwara n'ihu kpọkuo ma dụọ ọhanaeze ka ha na-abà n'ọdụ ụgbọala were akwụba ụgbọala ha, ma a ọ bụ were eburu/ebutù mmadụ, karịa ime nke ahụ n'akụkụ okporo ụzọ, bụ ebe na-ekwesighị ekwesi nakwa nkè iwu na-akwàdoghị. O mere ka a mara na ịkwụba ụgbọala n'akụkụ okporo ụzọ, tinyere iburu ma ọ bụ ibútù mmadụ n'ebe ekwesighị ekwesi na-eme ka ụzọ kpọchie, na-eweta ihe mberede okpro ụzọ ma sòrokwa n'ihe na-eweta agbakata akwụsị n'okporo ụzọ, ọbụnadị dịka ọ kpọkùrù ndị na-eme nke ahụ ka ha sepù aka na ya.
O mekwazịrị ka a mara na e nyela ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka éfè dị n'okporo ụzọ ikike na ntụziaka itinye amụmà ahụ n'ọrụ n'ozuzu òkè, iji wee bèlata agbakata akwụsị, óké mkpọchitoba ụzọ, oke ihe mberede okporo ụzọ, na ọtụtụ ajọ ọnọdụ ndị ọzọ nke ahụ na-ewèta.